Chekutanga Quake yadzoka muna 2021 ine zvinoonekwa kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Chekutanga Quake yadzoka muna 2021 ine yekuvandudza kugadzirisa uye mitsva mods uye mamishini. Kana iwe uine iyo 1996 imwe, saka unogona kuitamba paLinux padivi neDambudziko
Makore mazhinji apfuura, imwe hama yakatenga "super komputa" iyo yaifambisa 133mhz Pentium, 16mb ye RAM uye 2.4GB ye hard disk. Hongu, panguva iyoyo, iyo yaive "cucumber", kusvika padanho rekuti computer yangu yesainzi mudzidzisi haina kutenda kuti yaivepo. Pachitoro, chimwe chezvinhu zvandakaona ndisati ndauya nacho kumba yaive mutambo kudengenyeka, iyo yaive iine vhezheni yekuyedza, uye yaifamba nekukurumidza. Zvino, vagadziri vayo vakaitangazve, asi vakavandudza.
Quake yakabuda gare gare kupfuura Doom, asi iwo magiraidhi uye chiito zvakaita kuti ive imwe yeakanakisa FPS, kana isiri yakanakisa, yenguva iyoyo. Izvo zvavakaita izvozvi chimwe chinhu chiri mufashoni: chaizvo remaster it uye reboot, chimwe chinhu chatiri kuonawo mumaalbum mazhinji akaburitswa muma80-90s. Idzo nhau, asi zvaisazokwana pano kana tisingakwanise kuitamba paLinux. Kana kuti uzvitambe, nekuti tichaenda kukudzidzisa iwe kuti unakidzwe sei neDambudziko paLinux.
Kudzorerazve Quake, iyo yepakutanga yerima yekufungidzira FPS. Iyi yechokwadi, yakagadziridzwa, uye inoonekwa inovandudzwa vhezheni yepakutanga inowanikwa ikozvino paNintendo Shandura, PlayStation 4, Xbox One, @XboxGamePass, uye PC ine muchinjikwa-kutamba, yemahara mods uye mamishini uye nezvimwe!https://t.co/Sj1HjoWGun
- Quake Champions (@Quake) August 19, 2021
Kudzorerazve Quake, iyo yepakutanga yerima yekufungidzira FPS. Iyi yechokwadi, yakagadziridzwa uye inoonekwa inovandudzwa vhezheni yepakutanga yave kuwanikwa paNintendo Shandura, PlayStation 4, Xbox One, @XboxGamePass uye PC ine yemahara cross-play, mods uye mamishini, uye nezvimwe!
Tamba Quake uye Doom paLinux nekuda kweRetroArch
Kana tisina izvozvi, pamwe nzira yakanakisa ndeyekutenga pa chiutsi. Kana isu tatova navo, imwe yesarudzo dzakanakisa ndeye neiyo emulator RetroArch. Inogona kuiswa mumhando dzakasiyana dzemapakeji, asi iyo Flatpak vhezheni yakashanda zvakanyanya kwandiri paUbuntu uye Arch Linux based system.
Ose ari maviri anowirirana neMS-DOS, asi iyo kernel PrBoom inoshanda zvakanaka kune Dambudziko. Panyaya yeQuake, ndinoona zviri nyore kushandisa DOSBox mune yayo Yakachena vhezheni (DOSBox-Yakachena). Matanho akatsanangurwa zvakanaka angave anotevera:
Isu tinoisa RetroArch. Iri mune akawanda epamutemo marekodhi, asi ini ndinokurudzira iyo vhezheni Flatpak.
Tiri kuenda Kuisa Zvemukati / Dhawunirodha Core uye kurodha DOSBox-Yakachena uye PrBoom.
Nhanho inotevera inoenderana nemutambo watinoda kutamba. Tichifunga nezvekuti izvo zvinowedzeredzwa zvakasiyana, tinogona kugara tichiedza kumhanyisa iyo faira zvakananga, asi hazviite chokwadi chekuti inoshanda. Naizvozvo, mune ino nhanho tichaenda kuLoad Core uye kurodha DOSBox-Yakachena (Quake) kana PrBoom (Doom).
Iine kernel yakatakurwa, tiri kuenda kuLoading Zvemukati uye totsvaga iyo faira. Muchiitiko cheDambudziko iri .wad, nepo muQuake yakakwana kumhanyisa iyo .exe. Nzvimbo yaro inoenderana nekuti tine mitambo.
Uye saka mitambo yaizotanga. Quake yazvino uno, saka inowirirana nematanda emufaro. Kana isu tikashandisa mutungamiriri, senge Dualshock, inozviona uye isu tichafanirwa kumisikidza zvinodzora, asi ini ndinofunga zvinokosheswa mulaptop yatisingakwanise kushandisa mbeva.
Ichokwadi ndechekuti kutarisa Quake zvakare paPC yangu kwakadzosa ndangariro dzakanaka. Parizvino ini ndakaipa kwazvo, sezvo ndisina kumunzwa kubva kwaari kwemakore uye ndajaira kutamba neDualshock, asi ini ndinofunga ndichave nenguva yakanaka neanozivikanwa FPS. NeDambudziko, zvakanaka, pamwe futi. Kune avo vanosarudza ichangoburitswa, Quake yadzoka kugadziriswazve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Chekutanga Quake yadzoka muna 2021 ine yekuvandudza kugadzirisa uye mitsva mods uye mamishini. Kana iwe uine iyo 1996 imwe, saka unogona kuitamba paLinux padivi neDambudziko
MakerKing: chitsva chakajeka uye chekusika